Chin State Supreme Court - သမိုင်းကြောင်း
ချင်းပြည်နယ်တွင် ၁၉၇၄ ခုနှစ်အထိ တရားရုံးအဖြစ်သီးသန့် ဖွင့်လှစ်ထား နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ တရားစီရင်ရေးကိစ္စများကို နယ်ဘက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးရုံးများက ပူးတွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ချင်းပြည်နယ် အနေအထားအရ မြောက်ပိုင်းကို ကလေးမြို့တွင် ရုံးစိုက် ခဲ့သည်။ တောင်ပိုင်းတွင် မင်းတပ်မြို့၌ ခရိုင်တရားမတရားသူကြီးရုံးကို ၁၉၆၁ ခုနှစ် ကုန်ပိုင်း၌ ဖွင့်လှစ်ပြီး တရားရေးဝန်ထမ်းအဆင့်-၂နှင့် အဆင့်တူညီသော ခရိုင်ဝန် ဦးအောင်တိုးက တရားစီရင်ရေးကိုပါ ပူးတွဲ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဦးအောင်တိုး ပြောင်းပြီး နောက် ဦးမြက ဝင်ရောက်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ မြောက်ပိုင်း ဖလမ်းခရိုင်တွင်မူ သီးခြား ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
၁၉၇၄ ခုနှစ် ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့ကောင်စီ(မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ) ဖွဲ့စည်းသောအခါ ခရိုင်များကို ဖျက်သိမ်းပြီး ပြည်နယ်၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ တရားရုံး များကို သီးခြားဖွဲ့စည်း၍ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်နယ်အဆင့် ချင်းပြည်နယ်တရားရုံးတွင် ပြည်နယ် အဆင့်တရားသူကြီး (၃)ဦးဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် မတူပီမြို့နယ်မှ ဦးမန်လျန် (ဘီအေ၊ ဘီအယ်လ်၊ ဘီအာရ်အီး)အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် တီးတိန်မြို့နယ်မှ ဦးမန်လျန်၊ ဖလမ်း မြို့နယ်မှ ဦးလွှမ်တလိန်းတို့ ဖြစ်ကြပါသည်။ ပြည်နယ်တရားရေး ဦးစီးမှူးအဖြစ် တရားရေး ဝန်ထမ်းအဆင့်-၂ ဦးညွန့်က ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဦးညွန့် ပြောင်းရွှေ့သဖြင့် ၎င်းနေရာ၌ ပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူးအဖြစ် ဦးတင်မောင်က ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။ ၁၉၇၆ခုနှစ်တွင် ပြည်နယ်တရားသူကြီးအဖွဲ့ဝင်ဦးမန်လျန်မှာတောင်သူလယ်သမားရေးရာဗဟိုကော်မတီဝင်အဖြစ်
ရာထူးပြောင်းရွှေ့ခံရသဖြင့် ၎င်းနေရာ၌ ဦးဗန်လျန် (ထန်တလန်)အား ပြည်နယ်တရားသူကြီး အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ခန့်ထားခဲ့ပါသည်။
ချင်းပြည်နယ်၏ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲမှုအခြေအနေအရ ချင်းပြည် နယ်တရားရုံး"မင်းတပ်ရုံးခွဲ"ကို မင်းတပ်မြို့၌ ဖွင့်လှစ်ထားပြီး အမှုများကို ချင်းပြည်နယ် တရားရုံး တရားသူကြီးတစ်ဦးဦးက အလှည့်ကျသွားရောက်၍ နယ်မြေခံ ပြည်နယ်ပြည်သူ့ ကောင်စီ ကိုယ်စားလှယ် (ပြည်နယ်အဆင့်)များက အချိန်ပိုင်း ပြည်နယ်တရားသူကြီး အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပူးပေါင်း၍ ရုံးထိုင်ခဲ့ပါသည်။ ''မင်းတပ်ရုံးခွဲ"ကို တရားရေးဝန်ထမ်း အဆင့်-၂ ဦးတင်လှက ဆောင်ရွက်ပြီး သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်းခံရပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်း၏ နေရာကို ဦးဘဟန် တရားရေးဝန်ထမ်းအဆင့်-၃ကို ရာထူးတိုး၍ ပြောင်းရွှေ့နေရာ ချထားခဲ့ပါသည်။
၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် ချင်းပြည်နယ်တရားရုံး ''မင်းတပ်ရုံးခွဲ"ကိုဖျက်သိမ်းပြီး ဟားခါးမြို့ပြည်နယ်တရားရုံးတွင်သာ စုစည်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပါသည်။ ''မင်းတပ်ရုံးခွဲ"မှ တရားရေးဝန်ထမ်း အဆင့်-၂ ဦးဘဟန်မှာ ရာထူးတိုးမြှင့်၍ မန္တလေးသို့လည်းကောင်း၊ဟားခါးပြည်နယ်တရားရုံးတရားရေးဝန်ထမ်းအဆင့်-၂ ဦးသိန်းအောင်
သည်လည်း ပဲခူးတိုင်းသို့လည်းကောင်း ပြောင်းရွှေ့သွားသဖြင့် ၎င်းနေရာ၌ ဦးအောင်ကြည် ပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။
ပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူး ဒေါ်စိုးဉာဏ်က ချင်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် ဆောက်လုပ်နေမှုအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ၏ မိန့်ခွန်းပါအချက်အလက်များအား Zoom Application အသုံးပြု၍ ရှင်းလင်းပြောကြား
ချင်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားကြီး ဦးမြင့်သိန်းထွန်းက ဟားခါးမြို့မရဲအချုပ်ခန်းအား သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
ချင်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တွင် စာရေးဝန်ထမ်းများ ရုံးတွင်းငွေစာရင်းဆိုင်ရာ ရက်တိုသင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
ချင်းပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူးက ချင်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် ဆောက်လုပ်နေမှုအခြေအနေအား သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်း
Copyright © 2019 High Court of Chin State. All Rights Reserved.
Email : chin.hc@mptmail.net.mm